warkii.com » Maxaa kajira wararka sheegaya in Shah Rukh Khan iyo Taapsee Pannu sameeyn doonaan filimka xiga ee Rajkumar Hirani!!
Maxaa kajira wararka sheegaya in Shah Rukh Khan iyo Taapsee Pannu sameeyn doonaan filimka xiga ee Rajkumar Hirani!!
Dhab ahaan Taapsee Pannu waa atiriisho doorwalba sameeyn karto oo Versitale ah waxaana kuugu filan doorarkeeda kala nooca ah ee filimkada Manmarziyaan, Badla, Saand Ki Aankh, Pink, Thapad, Mission Mangal, Naam Shabana iyo kuwa kale.
Xidigtaan ayaa hader aflaam xiiso leh gacanta ku heysata oo ay ka howl gali doonto goordhow sidaas ay tahay warar ayaa sheegayaan inee filim horleh la sameeyn doonto Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan.
Haddii la rumeysto wararka soo baxayaan waxaa la sheegay in SRK iyo Taapsee hogaamiyaal ka noqon doonaan agaasime Rajkumar Hirani filimkiisa xiga waana arin xiiso leh waxaana la sugayaa in shaaca laga qaado warkaan.
Taapsee ayaa heli doonto Filimkeedii ugu weynaa abid hadii run noqoto in iyada iyo SRK mashruucan wada hogaamin doonaan dhanka kale xidigtaan waxay kasoo muuqan dontaa filimkeeda xiga Haseen Dilruba oo ay la jileyso Vikrant Massey.